Akhriso 10-ka Wadan ee laga helay kiisaska ugu badan ee Caronavirus | Dhexnimo Media
Home Wararka Akhriso 10-ka Wadan ee laga helay kiisaska ugu badan ee Caronavirus
Akhriso 10-ka Wadan ee laga helay kiisaska ugu badan ee Caronavirus
Caabuqa Caronavirus ayaa si xowli ah ugu sii faafaya daafaha dunida, waxaana maalinbo maalinta ka dambeysa sii kordhaya dadka uu ku dhacayo cudurkan iyo waliba kuwa u dhimanaya.
Waxaa la xaqiijiyay guud ahaan dunida in Caronavirus uu ku dhacay dad ku dhaw 1.5Milyan oo qof, waxaa sidoo kale la sheegay in cudurkan daafaha dunida ugu dhinteen dad gaaraya 88,500 .
Dalka Mareykanka ayaa noqday dalka laga helay kiisaska ugu badan ee Caronavirus, waxaana dalkaasi laga helay 432,132 kiis oo Caronavirus, waxaana dalka labaad isna noqday dalka Spian oo laga helay 148,220 kiis.
Qaarada Yurub ayaa noqotay wadamada ugu badan uu cudurkan ku faafay sidoo kale dadkooda ugu geeriyoodeen, waxaana laga cabsi qabaa in ay sii kordhaan tiradad dadka uu ku dhacayo cudurkan iyo kuwa u geeriyoonaya.
Dalka Shiinaha uu kasoo bilowday cudurka Caronavirus ayaa dadaal badan kadib ku guuleestay in ay xakameeyaan , waxaana dalkan laga soo tabinayaa kiisas aad u yar oo cudurkan ku aadan halka wadamada kale ee caalamka uu kusii faafayo.
Halkan ka Akhriso 10-ka dal ee laga helay kiisaska ugu badan ee Caronavirus
Mareykan 432,132 kiis
Spain 148,220 kiis
Talyaaniga 139,422 kiis
Jarmalka 113,296 kiis
Faransiiska 83,080 kiis
Shiinaha 82, 867 kiis
Iiran 64,586 kiis
UK 61,474 kiis
Turkiga 38,226 kiis
Belgium 23,403 kiis
Previous articleDeg Deg: Madaxweyne Trump oo eedeymo kulul u jeediyey Tedros Adhanom
Next articleIsbahaysiga Sucuudiga Ee Yemen Ka Dagaallama Oo Xabbad Joojin Ku Dhawaaqay